Iwo Wepamusoro Kubatsira KweMicro Swichi Iwe Unofanira Kuziva Mukugadzira
Kuunzwa kwema micro switch munyika yemagetsi zvigadzirwa nemidziyo kwaive shanduko. Kana iwe uri mugadziri wemidziyo yemagetsi, unogona kugara pamberi pemakwikwi uchishandisa micro switch. Icho chikonzero ndechekuti izvo zvishandiso zvinopa zvakawanda zvakanaka. Muchikamu chino, isu tiri ...
Zvinokosha zveMicro Swichi Unofanirwa Kuziva Usati Wagadzirwa
Iwe unogona kunge wakaona switch diki mumhando dzakasiyana dzemidziyo, asi unogona kunge usiri kuziva zita rizere reichi chigadzirwa. Izwi rekuti micro switch rinoreva chidiki-chinja-chiito chinja. Iro zita rinopihwa nekuti iyi mhando yekushandura inoda shoma simba rekushandisa. Muchikamu chino, isu tiri g ...
Pushira Bhatani Footswitch, Magetsi Toggle Chinja, Push Button Micro Chinja, Shandura Shandura Bhoot, Micro Push Bhatani Micro Chinja Hapana Nc Pamwechete, Toggle Chinja,